Pyae Phyo (MMiTD): September 2015
Facebook မှာ Video တွေ Autoplay ဖြစ်နေပြီး Data တွေကုန်နေလို့စိတ်ညစ်နေပါသလား?
ပထပဦးစွာ Setting ကိုသွားပါ အောက်နားက Videos ကိုနှပ်ပါ Auto-Play Videos ကို အနီဝိုင်းပြထားသလို Off လုပ်ပါ
♪ "လျှို့ဝှက် အန္တရာယ်တွေရှိနေတဲ့ Public WiFi များ" ♫
''Wi-Fi free'' ဆိုတဲ့ စာသားလေး ချိတ်ဆွဲထားတဲ့ ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ လက်ဖက်ရည် တစ်ခွက်မှာသောက်ပြီး Facebook သုံးနေမိဖူးပါသလား။ Wi-Fi လိုင်းကောင်းတဲ့ဆိုင်ပဲ သွားမယ်လို့ပြောဖူး ကြပါသလား။ ဟုတ်ကဲ့။ ဒါဟာ ဖြစ်နေကျပါပဲ။ ကျွန်တော်လည်း တူတူပါပဲ။ ကောင်းပါပြီ။ နောက်မေးခွန်းတစ်ခု မေးပါ့မယ်။ ဆိုင်က Wi-Fi ကို ချိတ်ပြီးသွားရင် စာဖတ်သူတို့ ဘာတွေများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသလဲ။ Facebook သုံးနေခဲ့သလား။ အရေးကြီးတဲ့ အချက်အလက်တွေကို Messenger ကနေ ပေးပို့ခဲ့သလား။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ရဲ့ Online Bank Account ထဲဝင်ပြီး ငွေလွှဲတာတွေ ပြုလုပ်ခဲ့မိသလား။
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်လောက်ကစပြီး Wi-Fi free ဆိုတဲ့ စာသားလေးဟာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်၊ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ အလျှိုလျှို ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ လူအတော်များများကလည်း သယ်ဆောင်ရ လွယ်ကူတဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်းတွေ ပိုင်ဆိုင်လာကြတော့ အဲ့ဒီဆိုင်တွေမှာ စားရင်းသောက်ရင်း Wi-Fi သုံးလာကြပါတယ်။ ချိတ်ဆက်ရတာလည်း လွယ်ကူ၊ ကွန်နက်ရှင်ကလည်း ကောင်းလေတော့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီး သုံးကြပါတော့တယ်။ အဲ့ဒီ အချိန်တုန်းကတော့ Public Wi-Fi တွေဟာ ဘာအန္တရာယ်မှ မရှိသေးပါဘူး။ အကြောင်းကတော့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ အင်တာနက် အသုံးပြုမှုနှုန်း နည်းပါးနေသေးတာရယ်၊ အွန်လိုင်းစီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ ခေတ်မစားသေးတာ ရယ်ကြောင့်ပါဘဲ။ Facebook ကို အပျော်သုံးမယ်။ Gtalk နဲ့ chat မယ်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေ လျှောက်ကြည့်မယ်။ ဒီလောက်ပဲ အင်တာနက်ကို အသုံးပြုကြပါတယ်။
ဒီဘက်နှစ်တွေမှာတော့ အင်တာနက်ဟာ အပျော်သက်သက်သာ မဟုတ်တော့ဘဲ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ မီဒီယာ စတဲ့ ကဏ္ဍများအတွက် အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ အွန်လိုင်းဈေးဆိုင်တွေ ထောင်လာကြတယ်။ အွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုတွေ ငွေလွှဲမှုတွေ ပြုလုပ်လာကြတယ်။ Facebook ကို တောင်မှ စီးပွားရေးသဘောနဲ့ အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာတော့ လုံခြုံရေးဟာ အရေးပါလာပါတယ်။ စာဖတ်သူတို့ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ အကယ်၍ တစ်ယောက်ယောက်က ကိုယ်အပျော်သုံးတဲ့ Facebook Account ရဲ့ password ကို ရသွားတယ်ဆိုပါစို့။ ဒါဆို ဘာဆက်ဖြစ်မလဲ။ အားလုံးသိတဲ့ အတိုင်းပါပဲ။ သူဟာ ခင်ဗျားရဲ့ အကောင့်ကို ဝင်မွှေမယ်။ message တွေကို ဝင်ကြည့်ပြီး အဖိုးတန်တဲ့ အချက်အလက်တွေ ယူမယ်။ message တွေ ရေးချင်ရာ ရေးပြီးပို့မယ်။ ဒါမှ အားမရသေးရင် ညစ်ညမ်းတဲ့ post တွေ share မယ်။ အကျိုးဆက်ကတော့ သားကောင်ဖြစ်တဲ့ စာဖတ်သူရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်းရတာပါပဲ။ ကံမကောင်းရင် account တောင် ပျက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ စီးပွားရေးအနေနဲ့ သုံးတာမဟုတ်ဘဲ အပျော်တမ်းသုံးတဲ့ account ပဲ ရှိပါသေးတယ်။
ထို့ကြောင့် လုံခြုံရေးဟာ တကယ့်ကို အရေးကြီးလှပါတယ်။ လုံခြုံရေးကို အထူးဂရုစိုက်ရမယ့် အချိန်များထဲမှာ Public Wi-Fi သုံးနေချိန်က ထိပ်ဆုံးက ပါပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Wi-Fi Free လို့ တွေ့လိုက်ရင် ဘာမှမစဉ်းစားတော့ဘဲ ချိတ်ဆက်ပြီး ပျော်ပျော်ကြီး သုံးပါတော့တယ်။ အမှန်တော့ Public Wi-Fi တွေဟာ အန္တရာယ်ကြီးတဲ့ နေရာတွေပါပဲ။ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ အချက်အလက်တွေကို ခိုးယူဖို့ အကောင်းဆုံး နေရာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Public Wi-Fi တွေကို ပေါ့ပေါ့တန်တန် သုံးမိရင်တော့ online bank account တွေ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်တွေ၊ စီးပွားရေး အချက်အလက်တွေက ကိုယ့်ကိုတာ့တာ ပြသွားပါလိမ့်မယ်။ စာဖတ်သူတို့ အနေနဲ့ Public Wi-Fi တွေရဲ့ အန္တရာယ်ကို သိရှိပြီး ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက် Digital Trends နဲ့ CNET ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေမှာ ရေးသား ထားတာတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Public Wi-Fi ကနေ အချက်အလက်တွေ ဘယ်လိုခိုးယူနိုင်တာလဲ
Public Wi-Fi network တစ်ခုထဲမှာ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနေတဲ့ user တစ်ယောက်ရဲ့ အချက်အလက်တွေကို ခိုးယူနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေက အများကြီးပါပဲ။ အဲ့ဒီအထဲမှာမှ အသုံးများတဲ့ နည်းလမ်းသုံးခုကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
(၁) Man-in-the-middle attack
ဒီနည်းလမ်းကတော့ သူ့နာမည် အတိုင်းပါပဲ။ Hacker က user နဲ့ server ကြားကနေ အချက်အလက်တွေကို ကြားဖြတ်ဖမ်းယူတာပါ။ ဥပမာ Wi-Fi free ပေးထားတဲ့ ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ hacker က ဆိုင်ရဲ့ Wi-Fi နာမည်နဲ့ ဆင်တူတဲ့ network တစ်ခုထောင်လိုက်မယ်။ password လည်း အတူတူလုပ်ထားမယ် ဆိုပါတော့။ ဒါကို ဆိုင်လာတဲ့ လူတစ်ယောက်က ဆိုင်ကပေးထားတဲ့ Wi-Fi အထင်နဲ့ အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ ချိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် hacker က အချက်အလက်တွေ အကုန်ရပါတော့တယ်။ ဒါဟာ အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ နည်းပဲရှိပါသေးတယ်။ ဒီ့ထက် ပိုမြင့်တဲ့ man-in-the-middle attack တွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။
Malware တွေဟာ ပိုပြီး ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ user ရဲ့ စက်ထဲက ရှိရှိသမျှ အချက်အလက်တွေကို ခိုးယူနိုင်လို့ပါပဲ။ အခုအချိန်မှာ malware တွေဟာ အတော့်ကို ပေါလာပါပြီ။ Windows, Android, iOS စတဲ့ PC OS ရော Mobile OS များပါမကျန် malware ကူးစက်ခံရနိုင်ခြေရှိပါတယ်။ ကူးစက်ဖို့ဟာလည်း လွယ်ကူပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူတို့တွေဟာ နောက်ကွယ်မှာ တိတ်တဆိတ် လုပ်နေတာကြောင့် ရှိမှန်းတောင် သိလေ့မရှိပါဘူး။
(၃) Wi-Fi Sniffing
တတိယမြောက် နည်းလမ်းကတော့ Wi-Fi Sniffing ပါပဲ။ ဒနည်းလမ်းဟာ network traffic ကို record လုပ်ထားပြီး အချက်အလက်တွေကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ် ရယူတဲ့နည်းလမ်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ hacker က user ရဲ့စက်က ပေးပို့သမျှ ဒေတာတွေကို သိမ်းထားပါတယ်။ ပြီးမှ အဲ့ဒီဒေတာတွေကို analyze လုပ်ပြီး အဖိုးတန် အချက်အလက်တွေကို ရယူပါတော့တယ်။ ဒီနည်းလမ်းဟာလည်း တကယ့်ကို ကြောက်စရာ ကောင်းပါ တယ်။
Wi-Fi ကနေ အချက်အလက်တွေ ခိုးယူဖို့ လွယ်လို့လား?
အထက်က နည်းလမ်းတွေနဲ့ Wi-Fi network တစ်ခုကို hack ဖို့ နည်းပညာမြင့်ပစ္စည်းတွေ၊ အဆင့်မြင့် software တွေ လိုမှာပဲလို့ စာဖတ်သူတို့ တွေးမိပါလိမ့်မယ်။ ဟုတ်ကဲ့။ Public Wi-Fi တစ်ခုကို hack ရတာဟာ ထင်သလောက် မခက်ပါဘူး။ လွယ်လွယ် ကူကူ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Programming အကြောင်း မသိတဲ့သူတွေတောင် ပြုလုပ်တတ်ပါတယ်။
Maryland တက္ကသိုလ်မှ တွဲဖက်ပါမောက္ခ တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ David Maimon က အခုလိုရှင်းပြပါတယ်။ "ခင်ဗျား Wi-Fi sniffing လုပ်ချင်ရင် လွယ်လွယ်လေးပါပဲ။ hack ချင်တဲ့ Public Wi-Fi network ကို ချိတ်ဆက်လိုက်။ ပြီးရင် software လေးတစ်ခုနဲ့ စောင့်ကြည့်နေလိုက်။ ဒီလောက်ပါပဲ။ ကိုယ့်ရဲ့သားကောင် ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကို အလွယ်လေး သိနိုင်ပါတယ်''
Password ခံထားတဲ့ Public Wi-Fi network ကရော လုံခြုံမှုမရှိဘူးလား
တကယ်လို့ စာဖတ်သူရဲ့အိမ်က Wi-Fi ကို password ခံထားမယ်ဆိုရင်တော့ password မသိတဲ့ ပြင်ပက လူတွေက ချိတ်လို့ရမှာ မဟုတ်ပါ ဘူး။ ဒါဆိုရင် အထက်က နည်းလမ်းတွေနဲ့လည်း ဘယ်လိုမှ hack လို့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာအတော့်ကို လုံခြုံပါတယ်။ ဒါဆိုရင် password နဲ့ ကာကွယ်ထားတဲ့ public Wi-Fi network တွေကရော မလုံခြုံဘူးလား။
ဟုတ်ကဲ့။ စာဖတ်သူအနေနဲ့ သိထားရမှာကတော့ Wi-Fi encryption ဟာ password မသိတဲ့ hacker ရဲ့ရန်ကိုပဲ ကာကွယ် ပေးတာပါ။ Password သိပြီး network ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ hacker ရဲ့ ရန်ကိုတော့ မကာကွယ်ပေးနိုင်ပါဘူး။ သိတဲ့အတိုင်းပဲ ဆိုင်တွေက Wi-Fi တွေဟာ encrypt လုပ်ထားပေမယ့် ဆိုင်လာတဲ့သူတိုင်း က password ကို သိခွင့်ရပါတယ်။ ဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာတော့ password ခံထားတဲ့ encrypted Wi-Fi network ဟာလည်း လုံခြုံမှုမရှိတော့ပါဘူး။
နောက်ဆုံးပေါ် Wi-Fi encryption နည်းပညာဖြစ်တဲ့ WPA2-PSK တောင်မှ အကာအကွယ် မပေးနိုင်ပါဘူး။ အကယ်၍ စာဖတ်သူအနေနဲ့ ဒီလုံခြုံရေး အားနည်းချက်ကို ရှောင်ရှားချင်ရင်တော့ WPA2-Enterprise နည်းပညာကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါဟာ လုပ်ငန်း သုံးအတွက်ပဲ ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပြီး အသုံးပြုရတာလည်း ရှုပ်ထွေးပါတယ်။ သာမန်သုံးအနေနဲ့ ဆိုင်တွေမှာ အသုံးပြုဖို့ အဆင်မပြေပါဘူး။
Public Wi-Fi သုံးနေစဉ်မှာ hacker တွေရဲ့ အန္တရာယ်ကို ဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်မလဲ
(၁) Public Wi-Fi ကို အပျော်တမ်းသာအသုံးပြုပါ။
Public Wi-Fi ကို အသုံးပြု နေချိန်မှာ အရေးကြီးတဲ့ လုပ်ငန်းကိစ္စတွေ မပြုလုပ်ပါနဲ့။ bank account ထဲမဝင်ပါနဲ့။ အွန်လိုင်းငွေးပေးချေမှုတွေ၊ ငွေလွှဲတာတွေ မပြုလုပ်ပါနဲ့။ ဒါ့အပြင် social app တွေ၊ email တွေကနေ အရေးကြီးတဲ့ အချက်အလက်တွေ ပေးပို့ခြင်းမပြုပါနဲ့။ Web browsing နဲ့ video download လုပ်ရန် လောက်သာ Public Wi-Fi ကို အသုံးပြုပါ။
(၂) VPN ကို အသုံးပြုပါ။
Virtual Private Network ဟာ Public Wi-Fi ထဲမှာ လုံခြုံစိတ်ချမှု ရှိစေနိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းပါပဲ။ VPN ဟာ user နဲ့ VPN server ကြားက ဆက်သွယ်မှုတွေကို လုံခြုံအောင် encrypt ပြုလုပ်ပေးတာကြောင့် hacker တွေအနေနဲ့ အချက်အလက်တွေကို အလွယ်တကူ မခိုးယူနိုင်တော့ပါဘူး။ VPN software တွေဟာ အသုံးပြုရတာ လွယ်ကူပါတယ်။ Windows မှာဆိုရင် CyberGhost, Android မှာဆိုရင် OpenVPN Connect, iOS မှာဆိုရင် OpenVPN တို့ဟာ လူသုံးများတဲ့ VPN software တွေပါပဲ။ ဒီ software တွေသုံးပြီး Public Wi-Fi ကို အတော်အတန် လုံခြုံစိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
(၃) Certificate Warning တွေကို သတိပြုပါ။
စာဖတ်သူအနေနဲ့ web browsing လုပ်နေစဉ်မှာ Certificate warning ဆိုပြီး ပေါ်လာတာကို တစ်ခါနှစ်ခါလောက်တော့ ကြုံဖူးမှာပါ။ အဲ့ဒီအခါမှာ အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ နေဖူးမှာပါ။ ဟုတ်ကဲ့။ နောက်ဆို သတိထားပါတော့။ Certificate warning ဟာ စာဖတ်သူ access လုပ်နေတဲ့ website ရဲ့ လုံခြုံရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တစ်ခုခုဖြစ်နေပြီလို့ ညွှန်ပြနေတာပါ။ ဒါဟာ စာဖတ်သူကို man-in-the-middle attack နဲ့ တိုက်ခိုက်နေတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Facebook, Gmail, Bank ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေမှာ အထူးဂရုစိုက်ရပါမယ်။ Certificate warning တွေ့ရင် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို ဆက်မကြည့်တော့တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
(၄) Public Wi-Fi ကို ရွေးချယ်ရာမှာ သတိထားပါ။
တစ်ခါတလေမှာ hacker တွေဟာ ကိုယ်ထိုင်နေတဲ့ ဆိုင်ရဲ့ Wi-Fi အယောင်ဆောင်ထားတဲ့ Wi-Fi တွေ ဖန်တီးထား တတ်ပါတယ်။ အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ ချိတ်ဆက်မိတဲ့သူတွေရဲ့ အချက်အလက်တွေကတော့ hacker ဆီ တန်းတန်းမတ်မတ်ကြီးကို ရောက်တော့တာပါပဲ။
ဒါကြောင့် ဆိုင်ရဲ့ Wi-Fi ကို သေသေချာချာ စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးမှ ချိတ်ဆက်ပါ။ နာမည်တူ Wi-Fi တွေရှိနေလား စစ်ဆေးပါ။ ဘယ် Wi-Fi မဆို စစ်စစ်တုတု အရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေ မပြုလုပ်ပါနဲ့။
(၅) Two Factor Authentication ကို အသုံးပြုပါ။
Two Factor Authentication ဆိုတာ account တစ်ခုကို log in ဝင်ဖို့ password အပြင် အခြား security check ကိုပါ ဖြတ်သန်းရတဲ့ စနစ်ပါပဲ။ ဥပမာ Facebook application မှာ Code Gen-erator ဆိုတာပါပါတယ်။ သူ့ကို activate ပြုလုပ်ထားရင် တခြားစက်ကနေ ကိုယ့် account ထဲဝင်ဖို့ဆိုရင် password သာမက code ပါ ရိုက်ထည့်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် hacker ဟာ password ကို သိသွားသည့်တိုင်အောင် code ကို မသိရင် account ဝင်လို့မရတော့ပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ account ကို ပိုလုံခြုံသွားစေပါတယ်။
(၆) Antivirus software များ ဆောင်ထားပါ။
Antivirus software အများစုမှာ အွန်လိုင်းလုံခြုံရေးအတွက် Safe browsing စတဲ့ feature တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ feature တွေဟာ Public Wi-Fi network တွေမှာ လုံခြုံစွာ နေထိုင်နိုင်ဖို့ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Antivirus soft-ware တွေဟာ ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်။
Ref : http://www.cnet.com/how-…/tips-to-stay-safe-on-public-wi-fi/
အမျိုးအစား: Knowledge , WiFi နှင့်ပတ်သက်သမျှ
♪ မြန်ဆန်ပေါ့ပါးပြီး မြန်မာစာကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့ - UC Browser for Android APK v10.7.2 Apk ♫
အခုကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်တဲ့ UC Browser လေးကတော့ အတော်လေးကိုပေါ့ပါးမြန်ဆန်မှုရှိတဲ့ Browser လေးပါ။ လက်ရှိကျွန်တော်အသုံးပြုနေတာပါ။ Facebook Account ဖွင့်တဲ့နေရာမှာ အဆင်ပြေ လွယ်ကူဆုံးနဲ့အမြန်ဆန်ဆုံးပေါ့ဗျာ။ သဘောကျလွန်းလို့ အခြားသောသူငယ်ချင်းများကို မျှဝေပေးလိုက် တာပါ။ အင်တာနက်ကွန်နရှင် ကျနေချိန်မှာလည်း ပေါ့ပါးမြန်ဆန်စွာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါ တယ်ဗျာ။ သူ့မှာ ကျွန်တော်သဘောကျတဲ့အချက်တွေပါရှိပါတယ်။ ဘာတွေလည်းဆိုရင် Browser မှာ ကိုယ်ပိုင် Downloader ပါဝင်တဲ့အတွက် ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနေကျသူများအဆင်ပြေစေမှာပါ။ Download Speed မြန်ဆန် တဲ့ အပြင် Resume Download ရရှိတဲ့အတွက် ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရာမှာအဆင်ပြေပါတယ်။ မိမိဝင်ခဲ့သော Link Address များကို Auto Save လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ကြည့် မယ်ဆိုရင် အစလေးရိုက် လိုက်တာနဲ့ မိမိဝင် ကြည့်ခဲ့ဖူးတဲ့ Address များကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Flash များပါဝင်သည့် Website များကို လည်း Support လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ Android OS 2.2 နှင့်အထက် ဖုန်းများမှာအသုံးပြုနိုင် မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
♪ လိုင်စင်နဲ့ APK တွေကို Full Version လုပ်ပေးမယ့် - Lucky Patcher v5.7.1 Apk ♫
Lucky Patcher ကိုတော့ ကျွန်တော်တစ်ခါမှမတင်ပေးဖူးပါဘူး။ အခုတင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာကလည်း တကယ့်ကိုအသုံးဝင်လို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ။ သူ့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်က နှစ်ခုရှိပါတယ်။ လိုင်စင်နဲ့အသုံးပြု ရမယ့် APK များကို Full Version လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး Application တွေ Game တွေ .တော်တော်များ များမှာ ကြော်ငြာတွေပါလာတက်ပါတယ်။ အဲဒီ ကြော်ငြာတွေကိုလည်း နောက်ထပ် .ပေါ်မလာအောင် Lucky Patcher နဲ့ဖြုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ Lucky Patcher ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ မိမိတို့ရဲ့ Phone က Root Access ဖြစ်နေမှရပါမယ်။ အသုံးပြုပုံကိုလည်း မူရင်းအတိုင်းအောက်မှာ ရှင်းပြ ထားပါတယ်ဗျာ။ Android OS 1.6 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
1. Go to your app drawer and open the lucky patcher app. You will seealist of apps installed in your phone. 2. Click on the app you wish to remove permissions.
♪ OPPO R7 Lite စမတ်ဖုန်း အလုံး ၆၀ အား ကံစမ်းရယူနိုင်မည် ♫
OPPO R7 Lite စမတ်ဖုန်း အလုံး ၆၀ အပြင် အခြားဆုလက်ဆောင် ၃ဝ,ဝဝဝ ကျော်ကို ကံစမ်းနိုင်မည့် ခဲခြစ်ပြိုင်ပွဲအစီအစဉ်ကို မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်ရန် ကျင်းပပြုလုပ် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ခဲခြစ်ကံစမ်းပွဲကို ပြည်တွင်းရှိ စမတ်ဖုန်းအသုံးပြုသူတို့အား အွန်လိုင်းလူမှုကွန်ရက်သုံးစွဲခြင်း၏ လွယ်ကူပျော်ရွှင်အသုံးပြုမှုကို ဖော်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် OPPO Myanmar နှင့် We Chat တို့ပူးပေါင်း၍ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းခဲခြစ်ကံစမ်းပွဲအား ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်မှ နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်အထိ ကျင်းပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
"တခြား Promotion အစီအစဉ်တွေနဲ့ မတူတဲ့အချက်က ရန်ကုန်၊ မန္တလေးမြို့ကြီးတွေကိုပဲ အဓိကထားတာမဟုတ်ဘဲ နေရာတော်တော်များများကို ရောက်ရှိနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး လုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါ တယ်။ အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှု အစီအစဉ်တွေ ဖန်တီးပေးသွားမယ့်အပြင် မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့သူအားလုံး ပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်မှာပါ" ဟု OPPO Myanmar ၏ CEO Mr David Tang က ပြောကြားခဲ့သည်။
ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်ကို OPPO Facebook စာမျက်နှာနှင့် OPPO အရောင်းဆိုင်များတွင် ပရိုမိုးရှင်း အချက်အလက်များ ထားရှိသွားမည်ဖြစ်ပြီး အရောင်းဆိုင်ဝန်ထမ်းများမှ WeChat ကို မည်ကဲ့သို့ထည့်သွင်း နိုင်ပုံ၊ OPPO ၏ OA အား Follow လုပ်ပုံနှင့် WeChat တွင် အသံ၊ မက်ဆေ့ခ်ျ၊ စတစ်ကာ အသုံးပြုပုံတို့ကို သုံးစွဲသူများအား ပြသပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဆုမဲများအနေဖြင့် OPPO R7 Lite ပထမဆု စမတ်ဖုန်းအလုံး ၆၀၊ ဒုတိယဆု ကျောပိုးအိတ် ၂,၅ဝဝ လုံး(သို့မဟုတ်) Ollie ခေါင်းအုံး ၂,၅ဝဝ လုံး၊ တတိယဆု စပီကာ + Selfie Stick + OTG Cable ပါဝင်သောဆုမဲ ၁ဝ,ဝဝဝ၊ စတုတ္ထဆု Ollie ခွက် ၁၅,ဝဝဝ ကံစမ်းနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ဆုလက်ဆောင် ကံစမ်းရရှိသူများအနေဖြင့် နီးစပ်ရာ OPPO Service Centers များတွင် ထုတ်ယူနိုင်ရန် စီစဉ်ထားကြောင်း သိရသည်။
Android Phone သုံးသူများအတွက် သတိထားရမဲ့ အချက်အလက်လေးတွေ ရေးပြီးတင်လိုက်ပါတယ်။
( ကြိုပြောထားမယ်နော် ဖုန်းလေးကိုင်ပြီး ဟိုလျှောက်ဒေါင်း ဒီလျှောက်ဒေါင်း မလုပ်ပါနဲ့ မျောက်ကိုက်လိမ့်မယ်)
ကျွန်တော်တို့ ဖုန်းတွေ FACEBOOK သုံးတဲ့အခါမှာ အင်တာနက်ကို ဖွင့်ကြရပါတယ်။ အင်တာနက်ကို ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ auto update တွေ Playstore market,1mobile market,Moborobo market,MobileGo market တွေက အလုပ်လုပ်နေကြပါတယ်။ အဲ့ဒီအခါကျရင် အောက်က ပေးထားတဲ့ apk(application)တွေ တက်လာပါက ဒေါင်းလင့် မလုပ်ပါနဲ့။ install မလုပ်ပါနဲ့။
အခုပြောထားတဲ့ APK တွေကို Download မလုပ်ပါနဲ့။ လုပ်လိုက်မိရင်တော့ မိမိရဲ့ ဖုန်းထဲရဲ့ system ဖိုင်ထဲကို ရောက်သွားပါလိမ့်မည်။ အဲ့ဒီအခါကျရင် မိမိဖုန်းကို facebook သုံးနေတဲ့အချိန်မှာ monkey test,Time Service ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးတွေ တက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူကို အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေပါတယ်။
WiFi Enhancer , PinkyGirls , WordLock , SettingService , Sex Cademy , TimeService , XVideo Codec Pack , Fast Booster , boom pig , iVideo , Indian Sexy Stories2, Amazon , Talking Tom3, WhatsWifi , Fruit Slots , Assistive Touch , Hubii News , Photo Clean , Hot Video , Wifi Speeder , Accurate Compass , itouch , Super Mario , Lemon Browser , WiFi FTP , All-star Fruit Slash , Light Browser , SmartFolder , Multifunction Flashlight , Ice Browser , Happy Fishing , XVideo , Simple Flashlight , Assistive Touch , PronClub , MonkeyTest , Memory Booster , Daily Racing , Hot Girls
အဲ့ဒီအခါကျရင် လွယ်လွယ်ကူကူ ရှင်းလို့ရတာ ရှိသလို လွယ်လွယ်ကူကူ ရှင်းလို့မရတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။
လွယ်လွယ်ကူကူ ရှင်းလို့ရတာကတော့ play store ကနေ cm security apk ကို ဒေါင်းပြီး မိမိဖုန်းထဲက monkey test virus ဖိုင်ကို ရှင်းလို့ရပါတယ်။
အဲ့လိုမှ မရရင်တော့ Phone Service ဆိုင်ကို သွားပြပြီးမှဘဲ ရှင်းလို့ရပါမယ်။
ဖုန်းလေးကိုင်ပြီး ဖျင်လေး လှုပ်တုတ် လှုပ်တုတ်
ref: AungMin Han
♪ Oculus နှင့် Samsung က ၉၉ ဒေါ်လာတန် Gear VR ကို ပြသ ♫
Samsung ၏ မိုဘိုင်းဌာနမှ ဒုတိယ ဥက္ကဌဖြစ်သူ Peter Koo က က Hollywood တွင် ပြုလုပ်သော Oculus Connect2ပွဲတွင် ၉၉ ဒေါ်လာတန် Gear VR Headset ကို ကြေညာလိုက်ပါသည်။ Gear VR Headset ကို Note 5, S6 Edge+, S6, S6 Edge စမတ်ဖုန်းများအပါအ၀င် Samsung ၏ Gear Products များဖြင့် တွဲဖက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Koo က Black Friday တွင် ရောင်းချမည်ဟု ပြောပါသည်။
Samsung က Hardware အသစ်ကို ပြသသည်သာမက Content အသစ်များကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးမည် ဖြစ်သည်။ Gear VR အသစ်သည် Netflix ကို ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဟု စင်ပေါ်တွင် ကြေညာခဲ့ ပါသည်။ Samsung က Facebook မှ ၃၆၀ ဒီဂရီ ဗီဒီယိုများကို ကြည့်ရှုနိုင်သော Oculus Video ကိုလည်း ကြေညာပါသည်။ ဂိမ်းကစားမှုများကို တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးသော Twitch ကိုလည်း ထောက် ပံ့ပေးပါသည်။
Oculus နှင့် Samsung သည် တန်ဖိုးနည်း Google Cardboard ကို အားမရသူများအတွက် တန်ဖိုးအနည်းငယ် ထပ်မံ ဖြည့်တင်းရုံဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော Hardware ကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် စားသုံးသူများကို VR အတွေ့အကြုံကို ခံစားနိုင်ရန် စွဲဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
♪ LG က အမေရိကန်တွင် ပထမဆုံးအနေဖြင့် လက်တော့များရောင်းချ ♫
LG က ပါးလွှာပေ့ါပါးသော Gram Series Laptop များဖြင့် အမေရိကန်တွင် ပထမဆုံး အနေဖြင့် လက်တော့များ ရောင်းချပေးလိုက်ပါသည်။
အရွယ်အစားနှစ်မျိုး ရွေးချယ်နိုင်ပြီး လက်တော့များသည် MacBook Air ထက် ပေါ့ပါးပါသည်။ ၁၄ လက်မ အမျိုးအစားသည် ၂.၁၆ ပေါင် အလေးချိန်ရှိပြီး MacBook Air ထက် ၀.၈ ပေါင် လျော့နည်းပါသည်။ MacBook ထက် ၂.၀၃ ပေါင် အလေးချိန်လျော့နည်းပါသည်။
၁၃ လက်မနှင့် ၁၄ လက်မ နှစ်မျိုးစလုံး၏ အထူသည် လက်မ၀က်သာရှိပြီး 1080p IPS Display ကို Carbon Magnesium နှင့် Lithium Magnesium ကိုယ်ထည်အတွင်းတွင် ထည့်သွင်းထားပါသည်။ HDMI, USB 3.0 Ports , microSD Card Slots များပါရှိပါသည်။
၁၄ လက်မ အမျိုးအစားအတွက် Intel i7 2.4GHz Processor/256GB SSD Storage သို့မဟုတ် Intel i5 2.2GHz Processor/128GB SSD နှစ်မျိုး ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
အရွယ်နှစ်မျိုးစလုံးတွင် 8GB RAM နှင့် အသံ အရည်အသွေးအတွက် Wolfson Digital to Analog Converter ထည့်သွင်းပေးထားပါသည်။ ဘက်ထရီသက်တမ်းမှာ ၇.၅ နာရီ အသုံးခံသည်ဟု LG က ပြောပါသည်။
i7 Model ကို ဒေါ်လာ ၁၃၉၉.၉၉ သတ်မှတ်ထားပြီး i5 Model ကို ဒေါ်လာ ၉၉၉.၉၉ ဖြင့် ရောင်းချ မည် ဖြစ်သည်။
♪ Alcatel က အာရှအတွက် OneTouch Flash2ကို ကြေညာ ♫
Alcatel က အာရှ ခုနစ်နိုင်ငံအတွက် စွမ်းဆောင်ရည်သင့် OneTouch Flash2ကို ကြေညာလိုက်ပါသည်။ OneTouch Flash2တွင် ငါးလက်မ 720p IPS Display , 13MP Rear Camera, 5MP Selfie Camera, 2GB RAM, 16GB Storage, microSD Card Slot, 3000mAh Battery တို့တပ်ဆင်ထားပါသည်။ အနောက်ဘက်ကင်မရာတွင် Phase Detection Autofocus ပါရှိပါသည်။
MediaTek MT6753 1.3GHz Octa-Core Chipset မောင်းနှင်မည် ဖြစ်ပြီး Android 5.1 Lollipop ထည့်သွင်းထားပါသည်။ 4G LTE , Dual-SIM တို့ကို ထောက်ပံ့ပါသည်။ အညိုနှင့် အဖြူ နှစ်မျိုး ထုတ်လုပ်ပေးထားပြီး India တွင် Flipkart က ရောင်းချမည် ဖြစ်ပြီး Philippines, Thailand, Indonesia, Vietnam, Malaysia, Singapore တို့တွင် Alcatel က Lazada အရောင်းဆိုင်ကို ရွေးချယ်ထားပါ သည်။ ဈေးနှုန်းကို မသိရသေးပါ။
♪ Mobile Guide Issue Vol-3 ၊ Issue-022 (28.9.15) ♫
Mobile Guide ဂျာနယ်ကို အပတ်စဉ် တနင်္လာ နေ့တိုင်းတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Mobile Guide ဂျာနယ်ကို ဖတ်ချင်သူများအတွက် မူရင်းဆိုဒ်ကနေပြီးဒေါင်းလုပ်လင့်ကို တင်ပေးလိုက်တာပါဗျာ။ Mobile Guide ဂျာနယ်ဝယ်ဖတ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ အခုအပတ်မှာ Mobile Guide Journal Vol(3), Issue (022) ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီနေ့ ဂျာနယ်ကို 28-Sept ရက်နေ့ထွက် Update လေးပါ။ ဂျာနယ်ကို ၀ယ်ဖတ်ရန်အတွက် အဆင်မပြေသောနေရာဒေသမှ သူငယ်ချင်းများအားလုံးအဆင်ပြေကြ ပါစေဗျာ။
♪ Techspace Journal Vol (4), Issue (25) (29.9.15) ♫
Techspace ဂျာနယ်ကို အပတ်စဉ်အင်္ဂါ နေ့တိုင်းတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Techspace ဂျာနယ်ကို ဖတ်ချင်သူများအတွက် မူရင်းဆိုဒ်ကနေပြီး ဒေါင်းလုပ်လင့်ကိုတင်ပေးလိုက်တာပါဗျာ။ Techspace ဂျာနယ် ၀ယ်ဖတ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ အခုအပတ်မှာ Techspace Journal Vol(4), Issue (25) ကိုတင်ပေး လိုက်ပါတယ်ဗျာ။ 29-Sept ရက်နေ့ထွက်လေးပါ။ ဂျာနယ်ကိုဝယ်ဖတ်ရန်အတွက် အဆင်မပြေသောနေ ရာဒေသမှ သူငယ်ချင်းများအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။
Credit to ==> https://www.facebook.com/techspaceJournal
အမျိုးအစား: Techspace Journal
♪ MPTမှ အင်တာနက်1MB ၆ကျပ်နှုန်း SMS ပို့ခ ၁၀ကျပ်နှုန်းဖြင့် အောက်တိုဘာ၁ရက်နေ့စတင်အသုံးပြုနိုင်မည် ♫
MPT ဆွေသဟာအစီအစဉ်အသုံးပြု သူများအနေဖြင့် အောက်တိုဘာ ၁ရက် မှစတင်၍ SMS တစ်စောင်လျှင်ပို့ခ ၁၀ကျပ် နှင့် မြန်နှုန်းမြင့် 3G အင်တာနက်အသုံးပြုခ 1MB လျှင် ၆ကျပ် နှုန်းဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
အဆိုပါအစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ၁၀၆သို့အသေးစိတ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပြီး အင်တာနက် Package များနှင့်ပတ် သက်ပြီးနှုန်းထားများလည်းလျော့ချ ထားကြောင်းသိရသည်။ယင်းအစီ အစဉ်များကို လည်းအောက်တိုဘာ ၁ရက်နေ့စတင်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ် သည်ဟုသိရသည်။
Credit to ==> Myanmar Mobile View
ဖုန်းထဲမှာ ဗီဒီယို,Musicတွေကို နားဆင်ရန်လိုအပ်မယ်-jetAudio Music Player+EQ v6.2.1 APK
Android ဖုန်းကိုင်းဆောင်သူများအတွက် jet Audio Music Player လိုအမည်ရသော jet Audio Music Player လေးကတော့ PC မှာဆိုရင် နံပါတ် One ပဲဗျာ။ Pc မှာ နံပါတ်ဖြစ်တာနှင့်တကွာ Now တော့ Android OS ဖုန်းတွေမှာ အသုံးများလာတာတွေရပါတယ်။ခု Android Version မှာထွက်လာတဲ့ Player ကိုလေ့လာကြည့်ရသလောက်တော့ သူ့မှာ Audio အတွက် Feature အများကြီးပါဝင်ပါတယ်။ အသံတွေကို မိမိလိုသလိုချိန်ညှိနိုင်မယ့် Equalizer လည်းပါဝင်ပါတယ်။ အချို့သော သီချင်းတွေမှာအသံတွေတိုးနေလို့ နားထောင်ဖို့အဆင်မပြေ ရင်လည်း အခု Jet Audio Player နဲ့ အသံကိုမြှင့် တင်ပြီးနားထောင်မယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေပြေ နားထောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Support လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ File Type ကတော့ MP3, WAV, OGG, FLAC, M4A, MPC, TTA, WV, APE, MOD စတာတွေအပြင်အခြားသော Audio Format ပေါင်းများစွာကိုလည်း Support လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ File Size 16.9 MB ပဲရှိပါတယ်။ Android Version 2.3.3 အထက် ဖုန်းအားလုံးမှာ အဆင်ပြေပါတယ်။အောက်မှာ Screen Shot တွေရိုက်ပြီးပြထားပါတယ်ဗျာ။
Posted by ဝင်းလှိုင်-နည်းပညာ No comments :
Huawei Bootloader Unlock Code
Huawei Bootloader Unlock Code တောင်းတဲ့အခါမှာ
Product ID တွက် ပြသနာတက်နေတဲ့ကိစ္စတွေအတွက်
ယခု Unlock Site တွင် Product ID ထည့်စရာမလိုပဲ Unlock Code တောင်းနိုင်ပါပြီ။
ref:Ye Lin Aung
Posted by Than Toe Aung3comments :
ခုတစ်ခေါက်တင်ပေးမှာကတော့ အသံဖြင့် ခိုင်းစေ လို့ရပါတယ်။ သူက မိမိအသုံးပြုခြင်တဲ့Appနှင့်ဂိမ်းဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကို အသံသွင်းထားပေးရမှာပါ။ သူက မိမိ အသံသွင်းထားတာကို ပြောလိုက်ရင် ပြန်ထူးပြီးတော့ မိမိ သတ်မှတ်ထားတဲ့ App ဥပမာ- zapya ကို ဖိုင်ပို့မယ်လို့အသံသွင်းထားရင် zapya ပွင့်မယ်ပေါ့။မြန်မာမှု့လေးဖြစ်လို့အသုံးပြုရတာအဆင်ပြေမှာပါ။နောက်တစ်ခါ သူကဖုန်းခေါ်ဖို့ကိုလည်းပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။
တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်။ App လေးကို ပြန်လည်ပြုစုပေးထားပါတယ် ။ အောက်မှာDownloadလုပ်ပါ။
Posted by Than Toe Aung 1 comment :
Facebook အသုံးပြုသူများအတွက် တစ်စုံတစ်ယောက်ထံ Friend Request ပေးပို့ထားပေမယ့် လျစ်လျူရှုထားသူများကို ကြုံဖူးကြမှာပါ။ အဲဒီ တစ်စုံတစ်ယောက်ဟာ အပြင်လောကမှာ သင်နဲ့ သိကျွမ်းသူတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာ လိုအပ်ချက်တွေ ရှိကောင်း ရှိလို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ကို လျစ်လျူရှုထားသူတွေကို သိခြင်းအားဖြင့် ပြင်ပကမ္ဘာမှာ ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံရေးကို ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို သင့်ရဲ့ Friend Request ကို လျစ်လျူရှုထားသူများကို သင် ဘယ်လို သိနိုင်မလဲ ? သင့်ရဲ့ Facebook မှ Digital Relationship ကနေ သင့်ကို လျစ်လျူရှုထားသူများကို သိနိုင်ဖို့ Facebook က နည်းလမ်းကို ပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။
ဒီစာမျက်နှာမှာတော့ သင့်ထံ Friend Requests ပေးပို့ထားပြီး သင်က လျစ်လျူရှုထားသူများကို ပြသပေးထားပါတယ်။ ပြန်လည် စိစစ်ပြီး သူငယ်ချင်းအဖြစ် လက်ခံချင်သူများကို Confirm လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ Friend Requests ကို လျစ်လျူရှုထားသူများကို ကြည့်ရှုဖို့အတွက်
အပေါ်ထိပ်မှ View Sent Requests ကို နှိပ်ပါ။
♪ မလှတဲ့သူကိုလှပသွားအောင်ဓါတ်ပုံရိုက်ယူနိုင်တဲ့ - Camera360 Ultimate v7.0.2 Apk (27-Sept) ♫
ပဉ္စလက်ဆန်တဲ့ Camera Application တစ်ခုလို့ပဲအမွှန်းတင်ပါရစေဗျာ။ အခု Feature အသစ်တွေပါဝင် လာတဲ့ Camera 360 လေးပါ။ Feature တွေအများကြီးကိုလည်း Free အနေနဲ့ ထပ်မံရယူနိုင်ပါသေး တယ်ဗျာ။ အခုခေတ် မိန်းကလေးတွေအသုံးအများဆုံး Application လို့ပြော လည်းမမှားပါဘူး။ သူ့ရဲ့ အစွမ်းကလည်း အံ့မခန်းကောင်းနေတာကိုးးးးး။ Camera360 ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကို Facebook သုံးစွဲသူ တိုင်းသိကြမှာပါ။ အပြင်မှာမချောပေ မယ့် Camera360 နဲ့ရိုက်လိုက်ရင် မင်းသမီးလောက်ကိုလှသွားရော ဗျာ။ အခု အသစ်ထွက်လာတဲ့ Version မှာတော့ Feature တွေများလာပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်သာကလိကြည့် ကြပါဗျာ။ ဘာတွေကောင်းလည်းဆိုရင် ဖုန်းမှာပါပြီးသား Camera ထက်ကိုရုပ်ထွက်ပိုကောင်းပါတယ် ဗျာ။ ပြီးတော့ ဓါတ်ပုံရိုက်နေစဉ်အတွင်းမှာ Effect ပေါင်းများ စွာထည့်ပြီး ရိုက်နိုင်ပါတယ်ဗျာ။ ရိုက်ပြီး သားပုံတွေကိုလည်း Effect ပေါင်းများစွာ ကာလာပေါင်းများစွာနဲ့ အလှဆင်နိုင်ပါ တယ်ဗျာ။ ဟာသပုံ ရုပ်ပြောင်ပုံ အချောအလှ ပုံတွေ ကိုလည်း ဓါတ်ပုံနိုက်နေစဉ်အတွင်းမျာလို သလိုဖန်တီး ယူနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ Camera MP နည်းတဲ့ ဖုန်းတွေမှာဆိုရင် ရုပ်ထွက်ကိုပိုကောင်းစေပါတယ်ဗျာ။ Camera MP များတဲ့ ဖုန်းတွေဆိုရင်တော့ ရုပ်ထွက်ပိုင်းကတော့ ပွဲသိမ်းပြီပေါ့ဗျာ။ Android OS 2.2 နှင့်အထက်ဖုန်း များမှာ စပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
▼ 2015 ( 5375 )
▼ September ( 339 )
Facebook မှာ Video တွေ Autoplay ဖြစ်နေပြီး Data တေ...
♪ "လျှို့ဝှက် အန္တရာယ်တွေရှိနေတဲ့ Public WiFi များ"...
♪ မြန်ဆန်ပေါ့ပါးပြီး မြန်မာစာကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ...
♪ OPPO R7 Lite စမတ်ဖုန်း အလုံး ၆၀ အား ကံစမ်းရယူနို...
Android Phone သုံးသူများအတွက် သတိထားရမဲ့ အချက်အလက်...
♪ Oculus နှင့် Samsung က ၉၉ ဒေါ်လာတန် Gear VR ကိုြ...
♪ LG က အမေရိကန်တွင် ပထမဆုံးအနေဖြင့် လက်တော့များရော...
♪ Alcatel က အာရှအတွက် OneTouch Flash2ကို ကြေညာ ♫...
♪ Mobile Guide Issue Vol-3 ၊ Issue-022 (28.9.15) ♫...
♪ Techspace Journal Vol (4), Issue (25) (29.9.15) ...
♪ MPTမှ အင်တာနက်1MB ၆ကျပ်နှုန်း SMS ပို့ခ ၁၀ကျပ်နှုန...
ဖုန်းထဲမှာ ဗီဒီယို,Musicတွေကို နားဆင်ရန်လိုအပ်မယ်-...
♪ Facebook မှာ သင့်ရဲ့ Friend Request ကို လျစ်လျူရ...
♪ မလှတဲ့သူကိုလှပသွားအောင်ဓါတ်ပုံရိုက်ယူနိုင်တဲ့ - ...
♪ “iOS 9.1 ရဲ့ ပထမဆုံး Public Beta ကိုဖြန့်ချိ” ♫
♪ ဒီဇိုင်းလန်းတဲ့ Icon လေးများ - Miu – MIUI7Styl...
♪ “Force Touch ကိုသုံးစွဲနိုင်တော့မယ့် Huawei Mate...
♪ “HTC One M9” ♫
♪ “Nokia ကိုဘယ်သူသတ်ခဲ့သလဲ” ♫
♪ Digital Life Journal Issue Vol-4 ၊ Issue 22 (28....
♪ Galaxy Note5 စတိုင်လေးအသုံးပြုချင်သူများအတွက် - ...
♪ “iPad တွေရဲ့ကြီးမားသောအလှည့်အပြောင်းကိုယူဆောင်လာ...
♪ Android User တိုင်းလေ့လာမှတ်သားထားသင့်တဲ့ - “Mob...
♪ တံတားဆောက်ရမယ့်ဥာဏ်စမ်း Game လေးတစ်ခု - Bridge C...
♪ Video တည်းဖြတ်, စာတန်းထိုး, Photo Slideshow အကော...
♪ “Password မသုံးဘဲ Lock ချမယ်” ♫
Network အကြောင်းလေ့လာနေသူများအတွက် စာအုပ်ကောင်း..(...
♪ Myanmar Mobile View Journal - Vol-1 Issue-10 (28...
♪ Internet Download Manager v6.23 Build 22 + Patch...
ဒီနေ့ထွက် - Messenger v41.0.0.15.125 APK
Samsung Glaxy A8 Fimrware (SM-A800F)
♪ ကြိုသုံးငွေပမာဏ ကျပ် ၈၀၀ ရယူအသုံးပြုနိုင်မည့် အူ...
♪ MPTမှနာရီတိုင်းမှာ ၅ မိနစ်စာ အစီအစဉ်ကို အောက်တို...
♪ “Meizu m2 note” ♫
♪ “Xiaomi Mi 4c လာမည်” ♫
♪ ဖုန်းထဲကနေ ဒေါင်းချင်ရာအားလုံးမြန်ဆန်စွာဒေါင်းယူ...
♪ “Meizu Pro5က GeekBench တွင် စွမ်းဆောင်ရည်ပိုကေ...
Battery Doctor (Battery Saver) v4.27.4 Apk နောက်ဆံ...
♪ မိမိဖုန်းထဲက အချက်အလက်တွေကိုခိုးယူခြင်းမှကာကွယ်ေ...
Folder ဖြစ်ဖြစ် အကြောင်းအရာတွေကို Backup လုပ်ပေးမဲ...
Miracle Box Crack V2.14 ပါ အသုံးပြုနည်းကလည်းအဆင်ြေ...
♪ ဈေးနှုန်းချိုသာပြီးစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်သော - ...
♪ “HTC One A9 ရဲ့ ဈေးနှုန်းမှာယူရို ၇၀၀ ကျော်မည်” ...
♪ ဟက်ကင်းဆိုင်ရာ Os များ ♫
♪ Samsung က ဈေးသက်သာသော Galaxy J2 ကို ရောင်းချ ♫
♪ Android Device များရှိ Google Settings App မှ ပြ...
♪ NetGuide Journal Vol (4), Issue (3) (23.9.15) ♫
♪ Android One စမတ်ဖုန်း Aquaris A4.5 ကို စပိန်နှင်...
♪ စမတ်ကျကျ iPhone အသုံးပြုနည်း - iPhone Smart Guid...
♪ အများနှင့်မတူသောမိုဘိုင်းဂိမ်းကုမ္ပဏီ (သို့) COC ...
♪ ဈေးနှုန်းသက်သက်သာသာနဲ့သုံးစွဲနိုင်မယ့်Toshiba S...
♪ Techspace Journal Vol (4), Issue (24) (23.9.15) ...
♪ Themes & Widgets များစွာထပ်ထည့်ပေးထားတဲ့ - Next ...
ဖုန်းထဲမှာ လူကြိုက်များတဲ့-AMC Security-Protector,...
iOS9တင်ပီးလို့ ဘက်ထရီ သိပ်မခံဖြစ်နေရင် လုပ်ဖို့ရ...
Huawei Phone များတွင် Google Service ထည့်ပြီး Goog...
♪ Facebook မှ Content များကို သိမ်းဆည်းနည်း (၃) နည...
♪ ဖုန်းဘက်ထရီ ပေါက်ကွဲမှုတွေကို ဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်မလ...
♪ မိမိကိုယ်မှာတက်တူးရုပ်ပုံအလှမျိုးစုံထိုးပေးမယ့် ...
♪ HTC Desire 826 ရဲ့အားသာချက် ၊ အားနည်းချက် ၊ နည်း...
♪ ဖုန်းထဲမှာတင် Zip & Rar ကို ဖြည်နိုင်ချုံ့ နိုင...
♪ Qualcomm ၏ နည်းပညာအသစ်က ၃၅ မိနစ်အတွင်း ဖုန်းများ...
♪2SIM ဖုန်းတွေမှာ SIM တစ်ကဒ်သာ ပေါ်နေခြင်း ♫
♪ Hack ခံလိုက်ရသည့် သင့်၏ Facebook Account အား ဘယ်...
♪ Digital Life Journal Issue Vol-4 ၊ Issue 21 (21....
♪ iPhone အသုံးပြုသူများအတွက် - Easy iDevice Guide ...
♪ Mobile Guide Issue Vol-3 ၊ Issue-021 (21.9.15) ♫...
International Slangs (နိုင်ငံတကာအတိုသုံးဗန်းစာလုံး...
PasscodeReader for *** iOS6to iOS 8.1.3 ***
ဖုန်း တုန်ခါမှုက ပုရွတ်ဆိတ်တွေကို လုပ်ဆောင်ချက်ပြေ...
♪ ဓါတ်ပုံကိုခဲခြစ်ပန်းချီ အဖြစ်ဖန်တီးပေးမယ့် - Ske...
♪ Myanmar Mobile View Journal - Vol-1 Issue-9 (22....
♪ YotaPhone3အား ZTE မှထုတ်လုပ်ပေးဖွယ်ရှိ ♫
♪ မြန်မာပြည်မှာ စားသုံးနေကြတဲ့ ချက်နည်းပြုနည်း အစံ...
ကဗျာဂျာနယ် အတွဲ(၆) (၂၁.၉.၂၀၁၅)
Lastest Xiaomi Official Roms
Folder Lock 7.5.5 Final + Serial Key Full Version
Voice Recorder Pro + For Window phone
WeatherWheel For Ios
Call of Champions For Ios